Sida loo dedejiyo howsha kombiyuutarkaaga | Windows 7, 8, 9, 10, Xp
Inicio/Tiknoolaji/Dardar-geli xawaaraha farsameynta kombuyutarkaaga [Windows 7, 8, 10, Vista, XP]
Talo soo jeedinTiknoolaji
Dardar-geli xawaaraha farsameynta kombuyutarkaaga [Windows 7, 8, 10, Vista, XP]
Halkaan ku hel dhammaan tallaabooyinka aad ku dedejineyso kumbuyuutarkaaga si fudud
0 4.110 7 daqiiqo akhri
Xaqiiqdii, sida kuwa badan, waxaad ku jirtaa daqiiqad PC-gaagu gaabis yahay.Ma u baahan tahay inaad ogaato sida loo dardar-geliyo xawaaraha hawsha kombiyuutarkaaga Windows 7, 8, 10, Vista ama XP? Marka ha walwalin, waxaan halkaan u joognaa inaan xallino dhibaatadaas yar.
Casharrada soo socda ee qoran waxaan ku bari doonaa sida loo dedejiyo xawaaraha waxqabadka ee kombiyuutarkaaga ugu badnaan 4 tallaabo oo keliya. Uma baahnid inaad soo dejiso softiweer ama wax kasta oo murugsan. Waxaan kuu balan qaadayaa in PC-gaagu xawaaraha kordhin doono waana ogahay inaad ii mahad celin doontid, ee aan BILAABno!
Marka hore, kuwa aan aqoon, waxaan si kooban u sharxi doonnaa wuxuu yahay PROCESSOR AMA CPU.
1 Waa maxay processor ama processor?
2 Hagaajinta waxqabadka GPU iyo CPU si loo dardargeliyo xawaaraha waxqabadka ee Windows 7, 8, Vista, XP
3 Talaabooyinka lagu hagaajinayo waxqabadka GPU iyo processor-ka ee Windows 10
4 Sidee loo hagaajiyaa xusuusta Ram iyo xudunta si loo dedejiyo processor-ka?
5 Talaabooyinka lagu hagaajinayo xusuusta Ram ee Windows 7, 10
6 Sidee loo dadajiyaa waqtiga si loo furo fayl iyo barnaamijyo loona dedejiyo howsha?
7 Sidee loo cusbooneysiiyaa processor-ka iyada oo la adeegsanayo toobiye?
8 Talaabooyinka lagu cusbooneysiinayo processor-ka iyada oo loo marayo toobiye Windows 10 ah
Waa maxay processor ama processor?
Qaybta Hawlgalka Dhexe ama processor waa qayb kambuyuutarka ka mid ah. Waxay mas'uul ka tahay fulinta howlaha lagama maarmaanka ah inta lagu guda jiro ka shaqeynta xogta kombiyuutarka, si markaas ay si habsami leh ugu shaqeyso. Horeba maqaal hore ayaan sidoo kale ku bari doonaa waxa ay tahay iyo sida loo abuuro kombiyuutar dalwad leh VirtualBox. Hada aan diirada saarno tan.
Hagaajinta waxqabadka GPU iyo CPU si loo dardargeliyo xawaaraha waxqabadka ee Windows 7, 8, Vista, XP
Si aad u bilowdid barashada sida loo dadajiyo kombuyutarkaaga Windows 7 iyo nidaamyada kale ee hawlgalka, talaabadan ugu horeysa waxaan yareyneynaa qaabeynta muuqaalka ah ee muuqaalka nidaamka qalliinka. Waxaas oo dhan, iyadoo looga dan leeyahay in Windows uusan soo bandhigin gaabis marka la shaqeynayo xogta.
Asal ahaan kuwa mas'uulka ka ah dardargalinta xawaaraha howsha kumbiyuutarkaaga ayaa ah processor-ka, kaas oo sidaan horay u soo sheegnayba uu yahay unugga dhexe ee ka shaqeynta iyo GPU. Qaybta dambe waa cutubka farsamaynta sawirada, taas oo ah, waxay mas'uul ka tahay ka baaraandegidda sawirada iyo habab kale, si shaqada processor-ka looga dhigo mid fudud. Gaar ahaan ciyaaraha fiidiyowga ama 3D kale iyo barnaamijyo is-dhexgal ah. Aniga oo aan sii ambo qaadin, aan u nimaadno barta ...
Waxaan u soconaa Equipo, waxaan xaq u guji oo Propiedades, sida sawirku na tusayo, tani waxay kaa caawin doontaa inaad dedejiso howsha kumbuyuutarka aad isticmaaleyso.
Adoo gujinaya Propiedades waxaan arki doonaa daaqad cusub. Halkaas ayaan gujin doonnaa Qalabaynta Nidaamka Sare. Kadibna waxay na tusaysaa daaqad kale oo aan gujin doonno qaabeynta qayb ka mid ah Wax qabad. Adiga oo gujinaya halkaas, sawirka hoose wuxuu ahaan doonaa sidiisa, wuuna calaamadeynayaa Ku hagaaji waxqabadka ugu fiicanka dibna aplicar y aqbalaan xagga hoose.
Talaabooyinka lagu hagaajinayo waxqabadka GPU iyo processor-ka ee Windows 10
Nidaamka hawlgalka ee Windows 10, waxaan sameyn doonnaa waxyaabaha soo socda:
Marka hore: Waxaan dooneynaa inaan isku mar ku riixno furayaasha soo socda: "Windows + R" PC-ga.
Labaad: Ka dib markaan dhameystirnay tallaabada ugu horreysa, waxaan qori doonnaa sisdm.cpl sidoo kale waad aragtaa.
Saddexaad: Markaa waxaan riixeynaa qeybta Fursadaha Horukacsan ka guryaha nidaamka, ka dibna waxaan si fudud u guji Waxqabadka ka dibna qaabeynta.
Afaraad: Tallaabadan ugu dambeysa, sidaan ku sameynay Wndows 7 nidaamka qalliinka, waxaan gujineynaa qaybta Ku hagaaji waxqabadka ugu fiican.
Iyada oo talaabooyinkan horeyba loogu dhameeyay nidaamka Windows 10 ee kombiyuutarkaaga, tani waxay ku siin doontaa boodbood xawaare ku shaqeynaya, waxaan kuu xaqiijinayaa, waad isku dayi kartaa. Aan sii wadno ...
Xusuusin muhiim ah: Xaaladda haysashada Windows XP, 7 ama VISTA, naqshadda baarka hawsha, daaqadaha, hooska, iwm ayaa is beddelaya. Noocyada kale qaabeynta muuqaalka ayaa hoos u dhigi doonta. Dhowr ayaa jiri doona, laakiin aan ku siiyo tusaale, hooska jiirka ayaa baaba'aya. Tan oo dhan iyada oo ujeedadu tahay in la hagaajiyo ilaha la heli karo si loo dardargeliyo ka shaqeynta kumbuyuutarkaaga.
Haddii ay dhacdo inaadan jeclayn muuqaalka cusub, waxaad dooraneysaa ikhtiyaarka ah Daaqadaha ha u doortaan dejinta--> Codso -> Hagaag iyo voila, arrinta ay go'an tahay qaybtaas, laakiin waxaan kuu xaqiijinayaa inay wax badan ka caawineyso xawaareynta howsha kombiyuutarkaaga
Tallaabadan ugu horreysa ee la dhammaystiray, waad tijaabin kartaa waxaadna arki doontaa in dardargelinta xawaaraha waxqabadka ee kombiyuutarkaaga horeba u hagaagay. Laakiin haddii aad rabto xawaare dheeri ah, aan sameyno tallaabada labaad.
Sidee loo hagaajiyaa xusuusta Ram iyo xudunta si loo dedejiyo processor-ka?
Tallaabadan labaad, waxaan ka faa'iideysaneynaa oo aan xawaareynaynaa howsha kombiyuutarkaaga ugu badnaan, hagaajinta waxqabadka qaybaha kombuyuutarkeena ...laakiin sidee u yeelnaa?
Fudud, aan Orod (Waxaan ku sameyn karnaa tan adoo ku riixaya furaha astaanta Windows + R). Mar haddii miiska orodka aan qoreyno msconfig y aqbalaan.
Daaqadda soo muuqan doonta, waxaan riixeynaa Boot (Windows XP waxaa loogu yeeraa boot.ini) ->Fursadaha Sare
Marka uu furmo daaqaddan, waxaan calaamadeyn doonnaa xulashooyinka Tirada processor-rada y Xaddiga ugu badan ee xusuusta.
Halkan waxaa si fudud loo dedejinayaa ka shaqeynta kumbuyuutarka, waxaan dhigeynaa (adigoo gujinaya fallaarta) tirada ugu badan ee xudunta ay leeyihiin iyo xusuusta ugu badan ee ay heystaan, intaas oo dhan. Waxaan ku siin Codso -> OK--> Ka bax adigoon dib u bilaabin.
Muhiim: Ka dib markaad dhigto xaddiga ugu badan ee xudunta iyo xusuusta, (ka hor aqbalida) calaamadee xulashooyinka ku calaamadeysan lambarka 3 ee sawirka. Sababtuna waa haddii aad gadaal ka beddeleyso RAM ama processor, uma baahnid inaad mar kale halkaas gasho si aanad u hubin. Haddii aad uga tagto inay calaamadeyso oo aad bedesho processor-ka oo aad xusuus ka dhigto sidii aad ahaan jirtay, qiimayaasha aad uga tagtay calaamaddu halkaas ayey ku sii nagaanayaan PC-na ma aqoonsan doono kuwa cusub Sidaa awgeed, waa inaad mar labaad gelisaa qaabeyntaas oo aad beddeshaa qiimaha.
Talaabooyinka lagu hagaajinayo xusuusta Ram ee Windows 7, 10
Waxaan tan ku samayn karnaa dhowr siyaabood, maadaama sidaan horay u soo sheegnayba, ay jiraan sababo dhawr ah oo xusuustayada RAM mararka qaarkood culeys badan saaran yahay. Sidaa darteed, waxaan qaadi doonnaa tallaabooyinka soo socda:
Marka hore: Waxaan joojin doonaa barnaamijyada bilowga ah, sideen u qabannaa?
Fudud, isku mar ayaannu isku qornaa Ctrl + Alt + Tirtir, tallaabadan waxaan ku furaynaa Maamulaha Hawsha.
Waxaan tagnaa qaybta Inicio halkaasna waxaan ka sii amba-qaadaynaa inaanu xirno mid kasta oo ka mid ah barnaamijyadan ka bilaabmaya marka kombiyuutarkaaga la shito oo cuno boqolley badan oo ka mid ah ilaha kombiyuutarkaaga. Si tan loo sameeyo waxaan si sax ah u gujineynaa jiirkayaga oo guji Dami ama xir
Labaad: Waxaan ku qasbi doonnaa xirida qaar ka mid ah codsiyada PC-ga, sidee?
Halkii aad ka ahaan lahayd qaybta Inicio (meesha aan horey u joojiney barnaamijyada bilowga), aan tagno qeybta Nidaamyada Markaad halkaa gaarto, waxaad arki doontaa liiska hababka lagu horumarinayo kombuyuutarkaaga. Si aad u xirto, si fudud naftaada ugu dheji midka aad rabto inaad dhameyso, dhagsii saxda ah oo aan gujino Dhameystir shaqada guriga.
Wax walba si fiican ayey u socdaan halkan, sax? Marka aan sii wadno:
Sidee loo dadajiyaa waqtiga si loo furo fayl iyo barnaamijyo loona dedejiyo howsha?
Waxaan u soconaa Orod (Astaamaha Windows + R), marka daaqaddu u muuqato ayaan qoreynaa regedit y aqbalaan.
DiiwaangelintaSi kooban haddii loo dhigo, waxay la mid tahay qaamuuska nidaamka hawlgalka ee Windows. Waa halka ay ku yaalliin qaddarka badan ee waxyaabaha lagu farsameeyo kombuyuutarka.
Markaan halkaa tagno waxaan arki doonaa daaqad. Waxaan raaci doonaa wadadan: HKEY_CURRENT_USER / PANELKA KONTOROOLKA / DESKTOP.
Intaad halkaa joogto, markaad labalaabato guji desktop, liiska ku yaal dhinaca midig waxaan fiirin doonaa: MenuShowDelay. Halkaas waxaan ku labanlaabi doonnaa guji oo qiimaha ku dhig 0 iyo aqbalaan. Waxaan ku celineynaa faylkooda meeshooda, hada waxaan siineynaa calaamadda taban ee ay ku leeyihiin agtooda waana intaas.
MUHIIM: Haddii aynaan liiska ku haynin MenuShowDelay, waxaan u abuuri karnaa inay sii wadato wax-ku-kordhinta si loo hagaajiyo xawaaraha processor-ka kombiyuutarkaaga, sidee?
Waxaan si sax ah u gujineynaa shaashadda, (waa inaan hubinno haddii kumbuyuutarradeena uu yahay 32-bit ama 64-bit) si aan u dooran karno qiimaha Dword (oo ah 32 jajab) ama Qword (oo ah 64 jajab.)
Si aad u ogaatid inta jajab ee kombiyuutarkaagu tagayo Equipo, guji midig Propiedades halkaasna waxaad ku arki doontaa astaamaha kumbuyuutarkaaga.
Marka tan dib loo eego waxaan abuureynaa MenuShowDelay adigoo gujinaya midig shaashadan, Nuevo (Qword ama Dword kuxiran waxaad hubisay) iyo voila. Hadda waa la abuuray oo keliya, waxaan ku fureynaa laba guji oo qiimaha 400 ee muuqda waxaan u beddeleynaa 0 iyo aqbalaan si loo caawiyo xawaareynta kumbuyuutarkaaga
Sidee loo cusbooneysiiyaa processor-ka iyada oo la adeegsanayo toobiye?
Tani waa talaabo aad u fudud, markaad abuureyso toobiye, markaad computerkaagu gaabis yahay laba jeer ayaad gujin kartaa 5 daqiiqo gudahoodna processor-ka ayaa la qaboojiyay waadna dedejin kartaa howsha kumbuyuutarka.
Waxaan tagnaa desktop-ka, waxaan si sax ah u gujineynaa, waan doorannaa Cusub –> Helitaanka tooska ah. Waxay noo muuqan doontaa inaan qorno meesha ay curiyaha ka tahay. Halkaas waxay ku dhajin doonaan nambarka soo socda:
% windir% \_ system32 \_ rundll32.exe advapi32.dll, ProcessldleTasks waana bixinnaa Xiga. Daaqad ayaa u soo muuqan doonta si ay magac u dhigto, tani waxay noqon kartaa midka aad doorbideyso, in kasta oo la xusuusto waxaad dhigi kartaa "processor processor refresh". Oo hadda haa, Dhameystir
Sida loo dedejiyo waxqabadka daaqadaha
4tan talaabo kumbuyuutarkaagu wuxuu noqon doonaa mid xor ka ah xusuusta wuxuuna u sahlayaa kheyraadkiisa inuu si fiican u shaqeeyo. Hadda waxaan rajeynayaa inaad la wadaagto si aan uga caawin karno dad badan inay dedejiyaan xawaaraha ay ku shaqeynayaan kumbuyuutarka.
Talaabooyinka lagu cusbooneysiinayo processor-ka iyada oo loo marayo toobiye Windows 10 ah
Kuwa leh nidaamka Windows 10 ee kumbuyuutarkooda, abuurista toobiye waa mid aad u fudud.
Waxaan kaliya dooneynaa inaan iska dhigno meel banaan oo ka mid ah desktop-ka PC-ga, waxaan si sax ah u gujineynaa jiirka. Marka liistadu soo muuqato, waxaan gujinnaa Cusub –> Gaabin. Waxaan haynay dhammaan shaqooyinkii la qabtay.
Hadda markuu saaxirku soo muuqdo, waxaan heli doonnaa su'aasha ku saabsan halka aan dooneyno inaan u dirno toobiye, taas oo ah, nooca amarka ama barnaamijka. Si fudud u nuqul amarkan oo ku dheji halkaa:
nadiifiyemgr / DC / LOWDISK
Ka dib dhowr tallaabo oo kama dambeys ah. waan bixinaynaa Xiga, waxaan ku dhejinay magac kasta iyo tan, waan sii wadeynaa waxayna umuuqaneysaa marin toos ah oo laga helayo desktop-ka PC-ga.
Haddii aan laba jibaarno guji toobiyedan ​​aan hadda abuurnay, shaashad ayaa si toos ah uga muuqan doonta meesha aan kaliya ku bixin karno aqbalaan inaan bilowno nadiifinta wadista adag markasta oo aan rabno.
Ogeysiiska ugu dambeeya ee muhiimka ah: Si loo hagaajiyo dardargelinta howlaha kumbuyuutarkaaga Uma baahnid inaad sameysid 4ta talaabo. Intaad mid kasta samaynayso, waad tijaabin kartaa hawlgalka iyo xawaaraha PC-ga. Laakiin qof walba ayay u taalHaddii aad rabto inaad sifiican ufiiriso ilaha kombiyuutarkaaga, raac 4-ta tillaabo.
dardar kumbuyuutarkeyga dardar-gelinta tallaabooyinka xawaaraha ka shaqeynta sida loo dedejiyo kumbuyuutarka sida loo dedejiyo pc-ga oo leh cmd sida loo dardar galiyo daaqadaha 10 pc sida loo dardar galiyo daaqadaha 7 pc sida loo kordhiyo xawaaraha daaqadahayga 7 pc sida loo qaabeeyo tirada ugu badan ee geedo daaqadaha sida loo sameeyo pc windows 10 dhakhso sida loo sameeyo pc windows 7 dhakhso sida loo hagaajiyo waxqabadka daaqadaha 10 pc sida loo hagaajiyo waxqabadka daaqadaha 7 pc computer gaabis ah gaabiska kombiyuutarka gaabis on pc xusuusta wan weyn xawaaraha processing xogta dhakhso hagaajinta waxqabadka cpu hagaajinta waxqabadka tillaabooyinka wan hagaajinta xawaaraha ka shaqeynta barnaamijka kumbuyuutarkaygu wuu gaabis yahay pc-ga waa gaabis pc-ga waa daaqadaha aad u gaabiya 10 pc-ga waa daaqadaha aad u gaabiya 7 tayadoo cpu wanaaji wan wanaajiyo kheyraadkayga pc computer gaabis ah gaabis kumbuyuutarka maxaa la sameeyaa tillaabooyinku waxay dedejiyaan howsha daaqadaha talaabooyinka si loo dedejiyo xawaaraha howsha kumbuyuutarkayga gaabis pc waxa la sameeyo marka kombiyuutarka gaabis yahay maxaa la sameeyaa si kumbuyuutarku dhaqso ugu socdo maxaa la sameeyaa si pc-ga uu dhaqso ugu socdo xawaaraha kombiyuutarka waaxda howsha dhexe
Barnaamijyada ugufiican si loo abuuro maab iyo maskax khariidado [BILAASH].
Eeg sheekooyinka Instagram bilaa raad [6 xulashooyin]